Raharaha mpitandrina nijangajanga Efa feno ny porofo, hoy ireo mpino
Tohin’ny fitokonana manoloana ny FJKM Fahazavana ao Foulpointe nataon’ireo mpino Krisitianina mitaky ny hanesorana ny mpitandrina ao an-toerana ny alahady teo dia nisy ny
fanazavana fa voarakitra ao amin’ny foto-dalàna sy fitsipika laharana 125 sy andininy 304 mikasika ny fitondran-tena tsy mendrika izany. Raha ny voalazan’ireo mpino ao amin’ity fiangonana ity dia efa ela io mpitandrina io no nijangajanga tamin’ireo mpino sasany ao amin’ny fiangonana saingy tsy nahitana porofo. Feno ny porofo taty aoriana ka nampahafatarina ny tomponandraikitra ao amin’ny rafitra misy ao amin’ny FJKM ary ny filohan’ny sinodam-paritany ao Toamasina no nanaovana ny fitarainana. Avy eo dia niakatra tany amin’ny foiben’ny FJKM saingy ny tany indray no namerina ireo mpino tany amin’ny filoha sinodaly izay voalaza ho miaro ilay mpitandrina tokony hoesorina. Voalazan’ireo mpino fa mpiray fiaviana amin’ny filohan’ny sinodaly ilay mpitandrina nanao fitondrantena tsy mendrika ka anton’ny fitokonana ny alahady teo izany, hoy hatrany ny fanampim-panazavana.